Madaxweyne C/weli Gaas”Shacabka Puntland ha ilaashadaan nabadda iyo amnigooda | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Madaxweyne C/weli Gaas”Shacabka Puntland ha ilaashadaan nabadda iyo amnigooda
Madaxweyne C/weli Gaas”Shacabka Puntland ha ilaashadaan nabadda iyo amnigooda
Madaxweynaha Dawlad Goboleedka Puntland Dr. Cabdiwali Maxmed Cali Gaas iyo wefti uu hogaaminayo ayaa safar ugu ambabaxay dalka Boqortooyada Sucuudiga, Safarka Madaxweynaha iyo weftigiisa ayaa ujeedada safarkooda waxaa uu la xiriira sidii ay u gudan lahaayeen waajibaadka Xajka.
Madaxweynaha Dawlad Goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shacabka Puntland kula dardaarmay inay Ilaashadaan nabad gelyadooda iyo xasiloonidooda, isla markaana ay la shaqeeyaan ciidamadooda sugaya amaankooda, Madaxweynaha ayaa sidoo kale Alle ka baryey inuu nabad kusoo celiyo, dalka oo nabadana ay dib ugu soo laabtaan.
Weftiga Madaxweynaha oo ka dhoofay magaalada Boosaaso ayaa waxaa ku wehelinaayey safarka Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland Mudane Axmed Cali Xaashi, iyo Murwadiisa iyo sidoo kale mas’uuliyiin ka tirsan Madaxtooyada Puntland, waxaana Madaxweynaha iyo weftigiisa garoonka diyaarada Boosaaso kusii sagootiyey maamulka gobolka Bari iyo degmada Boosaaso, taliska qeybta gobalka bari iyo masuuliyiin kale.
Madaxweynaha Dawladda Puntland oo ka hor inta aanu safrin lahadlay warbaahinta, ayaa sheegay faah faahin ka bixiyay ujeedka safarkiisa.
“Waxaan u ambabaxaynaa dalka Sacuudiga oo aniga iyo guddomiyihii Baarlamaanka Puntland iyo ummad kale oo reer Puntland-ah aanu u aadayno gudashada waajibaadka Xajka, Illahay waxaan ka baryayaa inuu naga aqbalo gudashada waajibaadka Xajka dhammaantayo, Insha Alla haddaanu tagnan, waanu soo ducaynaynaa in Illahay dalkayaga nabad noogayeelo, In Illahay horumarka iyo wanaagga noo siyaadiyo, In Illahay wixii dhib ah oo jira naga dulqaaado oo noo fududeeyo’’ Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Dhinaca kale Madaxweynaha Dawlad Goboleedka Puntland ayaa ummaadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Puntland ka dalbaday inay usoo duceeyaan isaga iyo weftigiisa, isla markaana ay soocafiyaan, soona saamaxaan cid kasta oo wax tabanaysa haddii ay jiraan.
Previous articleXaaladda deegaanka Xeraale oo saaka deggan kaddib dagaal shalay ilaa xalay ka dhacay
Next articleArgagixiso lagu toogtay Dalka Spain